ဆောင်းလူ – လေ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆောင်းလူ – လေ
(မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၆
မတူညီ ခြားနားမှုတွေနဲ့အတူ … ခံနုိုင်ရည်ရှိသလောက် အားတင်းထားလုိုက်ပါဦး …။ ဒီလေကုိုပဲ ..ရှုနေရတာ …။ ဒီလေကုိုပဲ … အမော ဖောက်မတတ် … ရှုရှိုက်နေကြရတာ …။
ဟုိုးအရင်ကလည်း ဟပ်ဟပ်ထုိုး ရှုခဲ့တယ် …။
ခုလဲ ရှုဆဲ …။
နောင် ရှေ့ဆက်ပြီး လောဘဇောတုိုက် ရှုရဦးမယ် …။
လေတွေ … ဖောက်ပြန်လာလုိုက်တာ …
တခါတလေ …စိမ်းစိမ်းတွေ …
လေတွေ … ဖောင်းကာလုိုက်တာ ….
တခါတလေ … ပဆုံ့ကြီးတွေ ..ကားခနဲ .ကားခနဲ ..နဲ့ …
အဲ့ဒီလေတွေကုိုပဲ ..ဖောဖောသီသီ .. ရှိုက်သွင်း … ရှုသွင်းနေသူတွေရှိတယ် …။ မစုို့မပုို့ ရှုနေရသူတွေရှိတယ် ….။ ရှုသွင်းပုံခြင်းကွာခြားလုို့ ထင်တယ် … လောက်ငခြင်း မလောက်ငခြင်း ကွာခြားလုို့ထင်တယ် … တချို့ ဖောင်းကား … တချို့ ပိန်ကပ် …။
လေပေး … လေယူနဲ့ … အယူတည့်တုံး … ရှုလုိုက်ကြတာ … ရှိုက်လုိုက်ကြတာ … ဟားဟား .ဟားဟားနဲ့ ….။ အပေးရှိလာပြန်တော့လည်း ရှုလုိုက်ကြတာ … ရှိုက်လုိုက်ကြတာ … ဟီးဟီး .. ဟီးဟီးနဲ့ …။
လေနဲ့အတူ …. ဒွန်တွဲနေကြတာတွေ …
လေနဲ့အတူ …. ယှဉ်တွဲနေကြတာတွေ …
လေနဲ့အတူ …. မရှိ မဖြစ်ကိစ္စတွေ …
အဆုံးစွန်သော ကိစ္စတွေနောက် ….
တနေ့နေ့ တချိန်ချိန် … ခုံခုံမင်မင် … မက်မက်စက်စက် ရှုရှိုက်နေကြရတဲ့ … ဒီလေဆုိုတဲ့အရာက ကိစ္စတုိုင်းကုို လေယူ လေသိမ်းမကောင်းလုို့ ..ဖြတ်တောက်ပစ်လုိုက်မယ်ဆုိုရင်မှဖြင့် …
တချို့က ..ပိန်ကပ် ..
တချို့က …ဖောင်းကား …
အဲ့ဒါ အသက်ရှုပုံ .. ရှုခြင်းကြားမှာ … တုိုက်ပွဲတွေကုို ဖြစ်လုို့ ..။